एफटीपी प्रोटोकॉल इन्टरनेट मानकहरूको भाग हो र धेरै मात्रामा जानकारी प्रसारण गर्न सेवा गर्दछ। पहिलो निर्दिष्टता, जसमा यो डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल थियो, 1971 मा देखा पर्यो। त्यस समयदेखि, FTP को सम्भावनाहरू विस्तारित भएका छन् र अनलाइन ब्राउजमा आवश्यक फाइलहरूको धेरै गीगाबाइटहरू डाउनलोड गर्न वा अपलोड गर्न आवश्यक छ कि प्रयोगकर्ताहरूले यसको बिना कसरी गर्न सक्नेछन् भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ। र यो साइट स्थानीय मेशिनबाट सर्भरमा सार्नको लागि कति समय लाग्न सक्दछ, वा यसको विपरीत? निस्सन्देह, तपाईं अभिलेखकर्ता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि के यो सर्भरले यस प्रकार्यलाई समर्थन गर्दैन भने? यो कल्पना पनि डराउँछ। त्यसैले FTP एक धेरै उपयोगी उपकरण हो।
शब्द "प्रोटोकल" को अर्थ दुई यन्त्रहरू बीचको जानकारीको आदानप्रदानको लागि एकदमै ढाँचा हो। र संक्षिप्त नाम "फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल" को लागि छ, जो अनुवाद "फाइल ट्रांसफर को प्रोटोकॉल" को रूपमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। जानकारी स्थानान्तरण गर्नको लागि , एफटीपी प्रोटोकलले टीसीपी च्यानल प्रयोग गर्दछ। एक्सचेन्ज "क्लाइन्ट-सर्भर" को सिद्धान्तमा बनाइएको छ। गोपनीय जानकारी पठाउनुहोस् यो प्रोटोकॉलमा, हुन सक्छ किनकि कुनै डेटा सुरक्षा छैन र plaintext सर्भरमा पठाइएको छ। निस्सन्देह, सामान्यतया तपाइँलाई FTP सर्वरमा जडान गर्न प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक छ, तर तपाईले यसमा भरोसा गर्नु हुँदैन किनभने प्रयोगकर्ताको आईडी र पासवर्ड स्पष्ट पाठमा प्रसारण गरिएको छ।
एफटीपी-प्रोटोकल एफटीपी-साइटहरूसँग जानकारी आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन उपयोगी र रोचक जानकारीको विशाल भण्डारण हो। FTP साइटमा भएका फाईलहरू एक रूख जस्तो डाइरेक्टरी संरचनामा स्थित छन्, जस्तै स्थानीय कम्प्युटर जस्तै। भण्डारको सामग्री हेर्नको लागि, तपाइँ कुनै पनि ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर यो राम्रो छ, निस्सन्देह, यसको लागि विशेष सिर्जना गरिएको कार्यक्रम प्रयोग गर्न। ओएस कमांड लाइनको साथ काम गर्न मनपर्ने उपयोगकर्ताहरूले "ftp" आदेश प्रयोग गर्न सक्दछ।
केहि FTP साइटहरू तिनीहरूको स्रोतहरूमा पहुँचमा प्रतिबन्धहरू छन्। कहिलेकाँही, तिनीहरूलाई प्रविष्ट गर्न, तपाईंले दर्ता प्रयोगकर्ताको लगइन र पासवर्ड जान्न आवश्यक छ। धेरै एफटीपी साइटहरूले तपाईंलाई पासवर्ड प्रविष्टि नगरी फाइलहरू डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। तर यो असम्भव छ कि यस्तो स्रोतमा तपाईंको डेटा लेख्न असम्भव छ।
यदि तपाईको ओएस विन्डोज होइन भने FTP कसरी प्रयोग गर्ने
यदि तपाइँ लिनक्स चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ कमांड $ man FTP टाइप गरेर उपलब्ध अपरेसनका लागि कागजात देख्न सक्नुहुन्छ। र FTP सर्भरमा जडान गर्न, तपाईंले $ ftp yoursite.at.domain डायल गर्न आवश्यक छ। प्राय: यस्तो आदेशहरू प्रयोग गरिन्छ:
बाइनरी - बाइनरी (गैर-पाठ) फाइलहरू स्थानान्तरण गर्न मोड परिवर्तन गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि, तस्बिरहरू;
Ascii - पाठिक जानकारी को प्रसारण मा स्विच;
सीडी फोल्डरनाम - टाढाको कम्प्युटरमा हालको डाइरेक्टरी फोल्डर फोल्डर नाममा परिवर्तन गर्नुहोस्;
टाढाको कम्प्युटरको हालको डाइरेक्टरीमा सबै फाइलहरू हेर्नुहोस्;
मद्दत - आदेशहरूको प्रयोगमा मद्दत;
Mget - धेरै फाइलहरूको साथसाथै डाउनलोड;
फाइलनाम राख्नुहोस् - रिमोट स्रोतमा स्थानीय फाइल फाइलनाम लोड गर्न कार्य गर्दछ;
मापन - रिमोट स्रोतमा बहु फाइलहरू डाउनलोड गर्दै;
बाहिर निस्कनुहोस् - FTP बाट निस्कनुहोस् र OS मा निस्कनुहोस्।
तपाईं GFTP, FOFF र FileZilla जस्ता प्रोग्रामहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ Windows लाई मनपर्छ भने FTP कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ
यस अवस्थामा, सबै चीज धेरै सरल छ, र नेटवर्कमा फेला पार्न सजिलो कुनै पनि FTP क्लाइन्ट तपाईंको लागि उपयुक्त छ। मुक्त सबैभन्दा लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू जस्तै FileZilla, FTPInfo, WinSCP। FTP प्रोटोकल प्रयोग गरेर जडान पनि लोकप्रिय कमांडर र FAR व्यवस्थापकको रूपमा यस्तो लोकप्रिय फाईल प्रबन्धकहरू द्वारा समर्थित हुन सक्छ। त्यसोभए, यदि तपाई प्राय यो प्रोटोकॉल प्रयोग गर्नुहुन्न भने, तपाइँ तपाई बिना यी गर्न सक्नुहुनेछ।
ठीक छ, यदि तपाईंलाई केहि समय डाउनलोड गर्न आवश्यक छ भने, तपाईले ब्राउजरमा URL को सट्टा निम्न आदेश टाइप गर्न सक्नुहुन्छ:
Ftp: // प्रयोगकर्ता: पासवर्ड @site.at.domain: पोर्ट, जहाँ
Site.at.domain - सर्भरको नाम,
पोर्ट कनेक्शनको लागी पोर्ट नम्बर हो (सामान्यतया यो 21 हो, र तपाइँ यसलाई छोड्न सक्नुहुन्छ)।
यदि तपाईंलाई अज्ञात एफटीपीसँग जडान गर्न आवश्यक छ भने, संक्षिप्त संक्षिप्त प्रविष्टि प्रयोग गरिन्छ:
एफटीपी: //host.at.domain: पोर्ट
यो हुन्छ कि FTP मार्फत जोड्दा केही समस्याहरू छन्। यस अवस्थामा, FireWall र एंटीवायरस सेटिङ्हरू जाँच गर्न यो समझदारी बनाउँछ।
एआरके स्मार्टफोन: निर्दिष्टीकरणहरू, समीक्षाहरू, सुविधाहरू
उत्पादन, सजावट र विनिर्माण: ravioli उपकरण लागि। पकौडी को उत्पादन को लागि उपकरण
कपर पहाड को पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री लक्षण। "कपर पहाड को Mistress" - पीपी को एक कथा Bazhov
किन आवश्यकता मा-बोर्ड कम्प्युटर 2114?